Cudurka faafa wuxuu si weyn u badalay qaabkii dadka reer Mexico ay u dukaameysan jireen. Xitaa iyagu ma jecla dukaamaysiga internetka, hase yeeshe, inta dukaamadu xiran yihiin, dadka reer Mexico waxay bilaabaan inay isku dayaan oo ay ku raaxaystaan ​​wax ka iibsiga internetka iyo bixinta guryaha. Kahor xiritaanka weyn ee COVID-19 awgeed, ganacsiga elektaroonigga ah ee Mexico wuxuu lahaa shinni ...
Warshadaha firfircoon - Ganacsiga elektarooniga ah, Habka horumarinta ganacsiga cusub
Bishii Janaayo 22, Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga wuxuu ka hadlay horumarinta suuqa tafaariiqda ee internetka sanadka 2020, isagoo sheegay in sanadkii la soo dhaafay, horumarinta suuqa tafaariiqda ee internetka ay muujisay isbeddel wanaagsan, cabirka suuqyaduna uu gaadhay meel sare oo cusub heer. Sanadka oo dhan 2020, f ...
Isbedelka mustaqbalka - silsilad sahay oo dhan oo ka mid ah horumarinta ganacsiga e-ganacsiga
Sida laga soo xigtay websaydhada Maamulka Guud ee Kastamyada, ganacsiga e-xuduudaha ayaa si xawli ah u koraya. Sannadkii 2020, 2.45 bilyan oo ah liisaska soo dejinta iyo dhoofinta ayaa lagu oggolaaday iyada oo loo marayo maareynta maareynta ganacsiga e-xuduudaha ee kastamka, iyadoo koror sanadle ah oo ah 63.3% la barbardhigayo sanadka ...
Wararka Shirkada - NCG vsThe Exchange vs Shengda ajendaha dood cilmiyeedka
Markay tahay 16:00, 20/11/2020, Wu Quandong, Madaxweynaha Nongchuanggang Cross Border E-Commerce (Weifang) Co. Ltd, VP Ma Yuyou, ayaa hogaaminaya kooxda si ay u soo booqdaan ugana soo qayb galaan dood cilmiyeed iskaashi ee Bariga Aasiya Xoolaha Isweydaarsiga Nuxurka ugu weyn ee kulankan ayaa ah in lagu falanqeeyo ka doodista Shiinaha Nongchuanggang cro ...
Bishii Janaayo 21st, hal koox oo ka ganacsada soo dhoofinta cuntada Kuuriyada Koofureed ayaa u timid NCG si ay goobta ganacsiga ugu xirtaan oo ay si qoto dheer uga wada hadleen tayada wax soo saarka, heerarka dhoofinta, amarrada iyo keenista. Ganacsatada Kuuriyada Koonfureed waxay soo mareen shirkad madaxbannaan oo 'NCG' oo u gaar ah meheradda ganacsiga e-commerce si ay u bartaan tayo sare ...